MAALINTII MURUGADA EE BADAHA SOOMAALIYEED
Qore: Marine Engineer Abdi Jama Aw-Aden
Waxaan uga tacsineynayaa shacabka S/liyeed guud ahaan ayaandarrooyinka taxanaha ah ee muddooyinkaan dambe dul habsaday oo ay ugu dambeysay tan ku saabsan xadeynta badaha S/liyeed ee ay Dawlad Qoleedka S/liyeed wax ka abuurtay. Waxaan si gaara ugu tacsineynayaa Bahdii Badda S/liyeed oo in badani naftooda u hurtay u adeegga badaha S/liyeed, waliba kaadirkii bad aqoonka ahaa oo aan hubo inay aad uga murugeysan yihiin jahliga lagu maamulay badahay garashada u lahaayeen.
Sida aan ka maqallay ergaygii aan la mahadin ee lagu sheegay wasiirka ee wax ka saxiixay heshiiska madow ee lala galay keenya, in uu saxiixay isla-oggolaan (memo.). Hase yeeshee ma sheegin waxa la isla oggolaaday nuxurkooda. Waxay aheyd in memo/gu leeyahay lifaaq. Waxay markaas u fasirmaysaa inay dawladda Kenya iyo cidaha caawiyaa ay soo dhammeystireen qoraalkii lagu ballamay in dal walba u gudbiyo Hey’adda Soohdimaha ee dalalka adduunka ee loo qabtay 13ka bisha Mey, 2009ka. Halka dhanka S/liyeed aan waxba ka diyaarsaneyn.
Waxaa cad in dhanka S/liyeed uu oggaaladay qorshe habeysan oo Keenya u adeegaya, kana daboolan indhaha Soomaalida.
Saldhigga cabbirka soohdin badeedka, waxaa ka mid ah in diillin gudban laga xarriiqo meesha ugu hooseysa xeebta la rabo in la qeexo xadka baddeeda. Ka dib lagu qotomiyo diillin, tan hore la sameyneysa xagal 90 darajo ah, markaasna dhererka diillintii qotontay laga mala awaalo xadkii la rabay. Tan hadda la filaayo in dunida laga hirgashana waa 350 mayl badeed. Labada dal ee Keenya iyo S/liya waxay leeyihiin xeeb isku taxan oo ku dhereran badweynta Hindiga. Wuxuu qofkii ku safra xeebtaas ama khariiddadda si wacan u dhuuxaa arkayaa in baxaaliga labada dal xeebahoodu kala duwan yahay. Tan Keenya ayaa dhulka sii gashan.
Waxay tahay, marka la hadoodilaayo qorshaha xadeynta labada soohdimood, in diillimaha gudban ay noqdaan barbarro (parallel). Haddaysan noqon dhinacroor, waxaa hubaal ah inay kuwa qotomaa oo cabbirkii la rabay lagu beegayo ay isgoyn doonaan. Waxaa dhici karta in diillinta qotonta ee Keenya ay soo abbaarayso dhanka soohdinta badda S/liyeed. Sidaasna ay labadii qotontay isku jaraan gudaha xad-badeedka S/liyeed, halkaasna lagu waayo hanti qaran. Arrintu sidaas waa ka sii adkaaneysaa oo qoraallo sharciyeeyadu waxay guud ahaan leeyihiin murugsanaan aqoon gaar ahi ka adeegi karto.
Waxay aheyd, in si khilaaf looga durko labada dal ee wadaaga xeebtu ay mid walba soo naqshadeyso hindisaheeda xadeynta badda, ka dibna ay is barbar dhigaan naqshadahooda, islana oggolaadaan arrintoo la turxaan bixiyey. Taas baana la oran karaa memo. la wada saxiixay.
Waxaan filayaa in ardayga ka gudbay dugsi hoose, garan karo xiriirka ka dhexeyn kara diillimaha gudban iyo kuwa qotoma, waa maade waa tan xulka dawladda isku sheegtay midnimo qaran ay ku rambastay.
Ma Dawlad Qarameedbaa (Nation State), mise waa Dawlad Qoleed (Clan State)?
Waxaa Dawlad Qarameed lagu qeexaa inay tahay tan u adeegta danta guud ee qaran. Xubnaha ka adeegaya dawladdaasna waxay noqonayaan kuwo lagu soo dhisay qaranyahannimo la hubiyey. Tan Dawlad Qoleedku waxay noqoneysaa mid u kale adeegta qolooyinka isu muujiyey dawladnimo. Xubnaha loo xulaana waxay noqonayaan kuwo tolnimo lagu soo doortay. Haddaba waxaad mooddaa in shacabka S/liyeed sharciyey wasiir toleed la rooraya wadaan iyo dhure uu ceelka dawladnimo tolkiis kaga waraabiyo……bal waxaan isbadnay eega!
Kaadirkii badda S/liyeed ee in badan ka sarreeyay dhigankiisa Keenya, wuxuu sii kala lahaa takhasusyo. Dhanka aqoonta hindiseynta badda (ocean graphic knowledge) oo ah kan muranku ka joogo rag baa noo lahaa.
Anigase qoray qoraalkaan kooban waxaa la ii tababaray farsamada qalabka maraakiibta, waxaana uga diiwaan gashaana Wasaaraddii Gadiidka Badda Chief Engineer. Haddaba wadeyadii iiga xeel dheeraa dhanka laga hadlayo fadlan ha i saxaan. Kuwii takhasuska ku lahaa xeerarka badahuna ha guntadaan sidii hawtalhamagga loo hagi lahaa, falaadkoodana loo burin lahaa……….tan suubbanna eebbe ha na waafajiyo.